» आजको राशिफल:: वि.सं.२०७७ पौष १० गते शुक्रबार , श्री पाथीभरा माताले हामी सबैको कल्याण गरून् आजको राशिफल:: वि.सं.२०७७ पौष १० गते शुक्रबार , श्री पाथीभरा माताले हामी सबैको कल्याण गरून् – हाम्रो खबर
आजको राशिफल:: वि.सं.२०७७ पौष १० गते शुक्रबार , श्री पाथीभरा माताले हामी सबैको कल्याण गरून्
२०७७ पुस १० गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
मेष (चु , चे , चो , ला , लि , लु , ले , लो , अ) रोकिएका काम फेरि सुरु हुन सक्छन् । जग्गाजमिनको कारोबारबाट राम्रो फाईदा हुनेछ । जटिल ठानिएको कामसमेत सम्पादन हुन सक्छ । न्यायीक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ ।
वृष (इ , उ , ए , ओ , वा , वि , वु , वे , वो) अनुहारमा कान्ती र मनमा शान्ति छाउला । विपरित लिंगीप्रति विशेष आकर्षण बढ्नेछ । बुद्धिको उपयोग गर्नाले जटिल ठानिएको कामसमेत सम्पादन हुन सक्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नु परे पनि तपाईँकै जित हुने योग छ ।
मिथुन (का , कि , कु , घ , ङ , छ , के , को , हा) आजको दिन उत्साहजनक ढंगले बित्नेछ । योजना कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त समय छ । मनमा उत्साह र उमंग छाउला । आत्मबलमा बढ्नेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइएला । प्रेममा सफलता मिल्नेछ ।
कर्कट (हि , हु , हे , हो , डा , डि , डु , डे , डो) पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । विपरित लिंगीबाट विशेष सहयोग मिल्ला । शरीर आलश्य होला । खानपानमा विशेष ध्यान दिनु होला । अध्ययन अध्ययापन सोचेजस्तो हुने छैन । कारोबार गर्दा सचेत रहनुहोला ।
सिंह (मा , मि , मु , मे , मो , टा , टि , टु , टे)छोटो यात्राको योग छ । साथीभाईको जमघट हुनेछ । आम्दानी बढे पनि अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च हुँदा बचत हुनेछैन । बोली विपरितको अर्थ लाग्दा प्रेममा मनमुटाव हुन सक्छ ।
कन्या (टो , पा , पि , पु , ष , ण , ठ , पे , पो)रोकिएका काम अघि बढ्न सक्छन् । आफ्ना योजना गोप्य राख्दा राम्रो हुनेछ । साथीभाईसँगको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ ।आज दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेलाछ । स्वादिष्ट भोजन पाईनेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । परिवारमा सुख सन्तोष पनि छाउनेछ । प्रेममा बाधा आउन सक्छ ।
वृश्चिक (तो , ना , नि , नु , ने , नो , या , यि , यु)मित्र मिलनको योग छ । मिष्ठान्न भोजनको अवसर मिल्नेछ । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । व्यापार व्यवसाय गर्नेका लागि पनि समय श्रेष्ठकर छ ।
धनु (ये , यो , भा , भि , भु , धा , फा , ढा , भे)नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आउन सक्छन् । जोश,जाँगर र उमङ्ग बढ्नेछ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढे पनि शैक्षिक क्षेत्र मध्यम नै रहनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पहिचान हुनेछ ।
मकर (भो , जा , जि , जु , जे , जो , ख , खि , खु , खे , खो , गा , गि)कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । मनका शान्ति र कान्ती छाउनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइएला । मेहनतको प्रशंसा गर्नेहरूको कमी हुने छैन । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । मनमा हर्ष र उमंग छाउनेछ ।
कुम्भ (गु , गे , गो , सा , सि , सु , से , सो , दा)हर्ष र उमंग छाउनेछ । लामो समयदेखि अधुरा रहेका काम पूरा हुनेछन्। साथिभाईको सहयोग रहनेछ । छिट्टै विश्वास गर्दा धोका पाइएला । लेनदेनमा विवाद आउन सक्छ । अध्ययन अध्यापन मध्यम हुनेछ ।
मीन (दि , दु , थ , झ , ञ , दे , दो , चा , चि)जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । काममा सफलता मिल्ला । साथिभाईको सहयोग मिल्नेछ । नसोचेको ठाउँबाट धन आउन सक्छ। वित्तीय संस्थाबाट सहयोग मिल्नेछ । खर्च पनि बढ्नेछ ।